Dhir - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan "dhirta". Bogag kale fiiri Geedaha iyo beeraha.
Kala Sooca Saynis
Noocyo Badan Dhirta
Beer • Geed
Dhir (Af Ingiriis : plant; ) sidoo kale loo yaqaano Dhirta Cagaaran waa noole ka samaysan unugyo badan oo isku xidhan taasi oo dulsaaran oogada sare ee dhulka. Dhirtu waa kalmada jamcisa dhamaan geedaha noocaydooda kala duwan ee laga helo carada dusheeda, biyaha dhexdooda, buuraha iyo meelo badan oo kala duwan.
Waxa jira noocyo badan oo dhirta ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ay ka kooban yihiin ilaa 375,000 oo nooc. Guud ahaan dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar iniinyo leh (Seed plants) iyo qaar aan lahayn. Waxa kale oo ay ka kooban tahay qaar qodax leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee. Qeybaha rasmiga ah ee dhirtu waa dhirta ubaxa leh (flowering plant), caleen-yare (carnifers), feerno, Lycopodiopsida, jirid-yare, algiya, caleenley iyo shurub. Dhirtu waxay ka mid tahay Nooleha.
Sidoo kale, dhirtu waxay leedahay unugyo-dahaadhan (cellwalls) kuwaasi oo u suurta geliya ineey sameeysato cunto ayadoo isticmaaleysa ileyska qoraxda, biyo iyo kaarboon-labo-ogsajiin. Dhirtu waxay manaafacaad iyo faa'iido badan u leedahay dunidan aan ku noolnahay; waxay suurto-gelisaa in hawada ka soo saart kaarboonka isla markaana ku sii deeyso hawada Ogsajiin oo ah mida teegeerta nolosha xayawaanka iyo dadka. Intaas waxaa dheer in dhirtu soo saarto midho, caleemo, jirid iyo xidido kal duwan taasi oo ay quud iyo cunto ka dhigtaan dhamaan noolaha intiisa kale ee xayawaanka iyo dadku ka midka yihiin.
Guud ahaan waxaa jira noocyo badan oo dhir ah; kuwaasi waxaa ka mid ah: beeraha, keymaha, iyo dhuldaaqsiimeedka. Maadaama juqraafiga dhulku kala duwan yahay, meelaha dhirtu ka baxdo aduunyada weey kala duwan tahay. Meelaha qaar waxaa ka baxa kumanaan nooc oo dhir ah, halka deegaanada qaar (sida saxareha ama lamadegaanka) ay ku yar tahay dhirtu. Maadaama noloshu ku tiirsan tahay dhirta waxaa waajib ah in la ilaaliyo jiritaanka, koritaanka iyo caafimaadka dhirta.
Geedku wuxuu u baahan yahay ileys, biyo iyo hawo si uu u samaysto cunto asagoo isticmaalaya Habka Samayska Cuntada.
Dhirtu waa noolaha kali ah ee cuntadiisa diyaarsada ayagoo isticmaalaya nidaam loo yaqaano Habka Samayska Cuntada (photosynthesis).
Geeduhu waxay u baahan yihiin ileys (inta badan ileyska dabiiciga ah ee qoraxda), biyo ay xididadu ka soo nuugaan dhulka iyo hawo - gaar ahaan kaarboon-labo-ogsaydh (C2O) si uu u samaysto cunto asagoo isticmaalaya Habka Samayska Cuntada.
Inta u badan dhirta, habka samayska cuntada ee geedku wuxuu ka dhex dhacaa caleemaha iyo laamaha dhirta, halkaas oo biyaha, awooda ileyska iyo [[kaarboon|kaarboon-labo-ogsaydh]ku ku falgalaan. Isku dhiska halkaas ka dhaca waxaa ka soo baxa Ogsajiin hawo ah oo caleemuhu cirka ku sii daayaan. Taasi oo ah faa'iidada koowaad ee dhirtu u leedahay deegaanka dhulka.
Habka Samaynta Cuntada ee geedka. Dhirtu waa isha koowaad ee Ogsajiinta ku darta dhulka.
Qaacidada Habka Samayska Cuntada ee dhirtu waa sidan:
2n CO2 + 2n DH2 + Ileyska Qoraxda → 2(CH2O)n + 2n DO
Kaarboon-labo-ogsaydh + deeq elektaron + awooda iftiinka → Kaarbohaydarate + deeq elektaron ogsajiin
Habkan cunto samayska dhirtu wuxuu dhacaa wakhtiga maalintii sababtoo ah iftiinka falaadhaha qoraxda waa lagama maarmaan. Sidoo kale, habkani waxaa lagu sameeyn karaa nidaam loo yaqaano greenhouse oo iftiin fiican siin kara geedka. Habka samayska cuntada dhirta waa deeqaha koowaad ee Ogsajiinta ku dara hawoda. Markasta oo geedku cunto sameeysto Ogsajiin ayuu sii daayaa taasi oo dadka iyo xayawaanku neefsadaan.
2 Dhul beereedka
4 Isticmaalka Dhirta
5.1 Qeybaha Boqortooyooyinka
6 Faa'iidooyin Kale
Geedaha aan caleenta lahayn.
Beer, ama Beero (wadar) waa nidaamka abuurida, korinta, xanaaneynta iyo soo saarida dhir laga sameeyo cunto, dhar, daawo, hooy iyo guud ahaan manafaac taageera nolosha dadka, xoolaha, xayawaanka iyo inta ku tiirsan. Beeruhu waa aasaaska nolosha iyo jiritaanka nolosha, iyo barta ay ka soo uunkantey horumarka xadaarada aadamaha. Waxa jira noocyo badan oo beero ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ay ka kooban yihiin ilaa 375,000 oo nooc. Dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar iniinyo leh (Seed plants) iyo qaar aan lahayn. Waxa kale oo ay kakooban tahay qaar qodax leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee.
Inkastoo dhirtu u qaybsanto mid la aadanuhu cuno iyo mid uu anfacsado iyo mid uusan waxba ku falin ayaa hadana waxaa jira dhul loogu talo galay beerashada, dhulkaas ayaa ka bedelan kan kale, waxaa ku badan macdanta iyo nafaqada dhiri ku bixi karto, dhuldaaqsimeedka waxaa lagu gartaa carrada madow ee dhoobeeyda ah, badanaa waxaa ka ag dhow biyo mareenno sida wabiyada iyo togaga, ama waa meel godan oo biyo fariistaan xiliyada roobka, dhirta lagu beerto ayaa leh xili la gurto.
Keymuhu waa dhul baaxad balaadhan leh oo geedo badan iyo cows badan leh, kuwaas oo dabiici ama dad-beer ah. Tiro badan oo dhir nooceeda, dhererkeeda iyo qaradeedu kala duwan tahay ayaa noqonaysa Keyn.
Oogada sare ee dhulka waxaa ku yaala keymo aad u badan kuwaas oo ku fadhiya 9.4% dhulka dunida. Si kale hadaan u dhigno keymuhu waxay qariyaan 30% dhulka qalalan ee dunida.
Intaas uun kuma koobna ee waxaa jira keymo biyaha ku dhex yaala. Waxaa ka mid ah keynta kelp.
Keymaha Kelp ee biyaha ka dhex baxa.
Keymaha dunida ugu weyn waxaa ka mid ah Keynta Tayga ee ku fidsan labo qaaradood, taas oo ka soo bilaabanta Kanada kuna fidsan dhamaan wadanka Ruushka, iyo Rainforest oo ku taala wadanka Brasil ee Koonfur Ameerika.
Keymaha alwaaxa ee dhaadheer.
Jirida geedaha waawayn waxaa laga sameeyaa alaabo badan oo dadku isticmaalaan.
Sida cilmiga jiyoolojigu sheegay, Dhirta dabiiciga ah waxay oogada dhulka ku beeran tahay in ka badan 370 milyan oo sano.
Barashada cilmiga tirada, koritaanka, caafimaadka, isticmaalka iyo baaxada keymaha dhirta caalamka waxaa loo yaqaanaa Silvicultur.
Dhirta dadku beeraan si looga sameeyo cunto, dhar, agabka dhismaha, qurux ahaan iyo waxyaabo kale waxaa loo yaqaanaa Beer (plantation).
Beeraha lagu beero khudaarta iyo midhaha waxaa lagu magacaabaa Beer-midho (orchard).
Dhul baaxad balaadhan leh oo geedo badan iyo cows badan leh, kuwaas oo dabiici ama dad-beer ah, waxaa loo yaqanaanaa Keyn (forest).
Sidoo kale, deegaanada fidsan ee buuruhu ku yar yihiin isla markaana leh cows badan iyo geedo talanteel ah waxaa lagu magacaabaa Dhuldaaqsiin (savanna).
Guud ahaan, dhir badan ayaa ku taala oogada dhulka. Meelaha qaar aad ayay ugu badan tahay oo keymo waawayn ayaa ku yaala - keymaha ugu weyn dunida waxaa ka mid ah Rainforest oo ku taala wadanka Brasil ee Koonfur Ameerika iyo Tayga (Taiga) oo ku fidsan labo qaaradood oo kala ah Waqooyiga Ameerika iyo Ruushka. Dhamaan noocyada geedku faa'iido badan ayuu u leeyahay noolaha iyo deegaanka dhulka.
Nolosha dadku si toosan ayay ugu xidhan tahay dhirta, mar ahaan waa isha koowaad ee quudka (cunto), daawooyinka, agabka guryaha, dharka iyo sheeyo badan oo aadamuhu isticmaalo. Marka labaad, ayadoo isticmaalaysa Habka Samayska Cuntada dhirtu si joogto ah ayay hawada ugu dartaa neefta Ogsajiinta, midaas oo noole badan neefsado.
Waxa intaas dheer in dhirtu difaac u tahay carada ayadoo ka ilaalisa nabaad-guurka.
Geeduhu waa isha ugu horeeysa ee soo saarta noocyo badan oo cuntada dadku quutaan maalin kasta. Khudaarta sida basasha, tamaandhada, besbaask, toonta, saladhka, barandhada iyo kuwo kale oo badan; iyo midhaha sida muuska, liinta, tufaaxa, cambaha, saytuunka, timirta iyo in badan oo kale waxay ka mid yihiin dhirta loo beero ganacsi ahaan ee caalamka oo dhan laga cuno.
Intaas waxaa dheer, dhirta waxaa laga sameeyaa sheeyo badan oo cuntada lagu darsado, waxa ka mid ah sonkorta, daqiiqda ama burka, saliida, shaaha, koofiga iyo in badan oo kale. Intaas waxaa dheer, noocyo badan oo geedaha ka mid ah waxay udug iyo caraf u sameeyaan cuntada, tusaale ahaan, heylka, qorfaha iyo carfiyayaasha kale.
Dhinaca kale, in badan oo dhirta ah waxay leeyihiin ubax leh dheecaan macaan (nectar) kaas oo xasharaadka soo jiita. Shinidu waxay ururisaa dheecaankaas macaan ka dibna ka sameeysaa malabka oo ah wax dadku cunaan. Sidoo kale, caleenta iyo laamaha dhirta waxaa quuta xoolaha dadku dhaqdaan kuwaas oo cunto iyo cabitaanba siiya aadamaha.
Saxifraga umbrosa (Yehovah-ubaxa, Dhibcaha guduudan ee ubaxyada cadcad waxay u eg yihiin magaca Yehowah Ilaaha ah ee Cibraaniga ah)
xaabadu waa shidaal laga helo kul.
Alwaaxa guryaha lagu dhiso.
Dhirta qaar ka mid ah, sida geedka dunta (cotton tree) waxuu soo saara midhaha dunta, taas oo la warshadeeyo ka dib laga sameeyo noocyo badan oo dhar ah.
Qoryaha iyo alwaaxyada laga soo guro dhirta waxaa laga sameeyaa agab badan, kuwaas oo dadku isticmaalaan si nolosha u fududaato. Agabka laga sameeyo dhirta waxaa ka mid ah: miisaska, kuraasida, kabadhada, sariiraha, weelka wax lagu cuno iyo waxyaabo kale oo badan.
Ilaahay baa wax walba abuuray (sidoo kale dhirta)
Geedka rabadhka laga sameeyo oo dareere rabadh ah laga guraayo.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhir&oldid=235704"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 May 2022, marka ee eheed 14:55.